Myanmar Daily News – Page 49
သံဃာအပါး (၃) သောင်းကို ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းခဲ့သူ မြင်သူငေးရတဲ့ ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင် ဒေါက်တာမလေး
သံဃာအပါး (၃) သောင်းကို ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းတဲ့ မြင်သူငေးရတဲ့ ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင် ဒေါက်တာမလေးကတော့ တကယ့်ကို သက်ရှိနတ်မိမယ်လေးလိုပါပဲ။ အလှူအတန်းရက်ရောသလို ချောမောလှပမှုကြောင့် ချီးကျူးခံနေရတဲ့ ဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ့်ကို ရှေးဆုတောင်းများကောင်းခဲ့သူလို့ ဆိုရမလားဘဲ။ ပိုက်ဆံလည်းချမ်းသာသလို ၊ ရုပ်ရည်ကလည်းသန့်ပြန့်ချောမောလှတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ” ရှေးဆုတောင်းများ ကောင်းခဲ့လေသလား…???မန္တလေး၌ ၊ သံဃာအပါး ။တစ်သောင်းနှစ်သောင်း ၊ သုံးသောင်းတို့ကို ။သုံးကြိမ်သုံးခါ ၊ဆွမ်းဆန်စိမ်းတွေ ။လောင်းလှူတဲ့ခါ …
US$9.6 billion စည်းစိမ်ကိုစွန့်ကာ သာသနာမှာ အပြီးပိုင် ဝင်ရောက်သွားတဲ့ဆရာတော်ရှင်သီရိပုညော
တဈခြိနျက ရှှဘေုံပေါျမှာအသပွာထုတျကို ခေါငျးအုံးလုပျ ဒေါျလာကို မှေးရာလိပျပွီး အိပျခဲ့တဲ့ သူဌေးသား ၊မရှိဆိုတဲ့ စကားကိုမကွားဖူးအောငျထိ ပွည့ျစုံတဲ့ သူဌေးသား ၊ သူဌေးသမီးတှဝေိုငျးဝိုငျးလညျခဲ့တဲ့ သူဌေးသား၊ လကျညှိုးထိုး ဘာမဆိုဖွဈနိုငျခဲ့တဲ့ သူဌေးသား ၊ ဟငျးခှကျ တဈရာနဲ့စားခဲ့တဲ့ သူဌေးသား၊ အကောငျးဆုံး စားဖိုမှူး တှရေဲ့ လကျရာတှကေို တဈနေ့တဈခွား မရိုးရအောငျ စားခဲ့တဲ့သူဌေးသား။ အောျ.. ခုတော့ …
တရားကျင့်ကြံ အားထုတ်ထားမှုကြောင့် ပြုံးလျက်ပင် ကွယ်လွန်သွားသော ယောဂီအဖွား
လူဆိုတာ ကှေးသောလကျမဆန့ျမီ ဆန့ျသော လကျမကှေးမီ သခွေငျးတရားကိုရငျဆိုငျရတတျပါတယျ။ အသကျအရှယျအလိုကျ သခွေငျးတရားက ဝေးလှနျးတယျ နီးလှနျးတယျမရှိပါဘူး ၊ ငါ့အရှယျက တရားအားထုတျရမဲ့အရှယျမဟုတျသေးပါဘူးဆိုပွီး ပေါ့ပေါ့လေး မနလေိုကျပါနဲ့ ၊ သခွေငျးတရားက အသကျအရှယျကိုမကွည့ျပါဘူး ။ ဒါကွောင့ျ ရခဲ လှတဲ့ လူ့ဘဝမှာ အနတေတျမှ အသမွေတျပါလိမ့ျမယျ။ အခုတဈခါကတော့ ဗုဒ်ဓ ရဲ့ နညျးလမျးတှကေို မှနျကနျစှာ ရှာဖှတှေေ့ရှိသှားတဲ့ …
(၅၃)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကုသိုလ် ဖြစ်သူဌေးကြီး ဦးဇော်ဇော် ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးသီတင်းသုံးရာကျောင်းမှာ ရဟန်းဝတ်
စီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျဦးဇောျဇောျမှာ မွနျမာ့နိုငျငံ ၏ ထိပျတနျးစီးပှားရေးသမားတဈဦးဖွဈပွီး ဇနီးမှာ ဒေါျသနျးသနျးဦးဖွဈသညျ။အခွားအမညျမှာ ဦးတငျဆနျး ဖွဈသညျ။ မွနျမာဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ၏ဥက်ကဋ်ဌ အဖွဈထမျးဆောငျလြှကျရှိသညျ။ မှေးဖှားသည့ျနေ့- ၁၉၆၇၊ ၂၂ ဩဂုတျ မှေးဖှားသည့ျ နရော-ဧရာဝတီ တိုငျးဒသေကွီး အိမျထောငျဖကျ- ဌေးဌေးခိုငျ ပညာရေး- ရနျကုနျတက်ကသိုလျ (၅၃)နှဈမွောကျမှေးနေ့ကုသိုလျ ဖွဈ ဦးဇောျဇောျ ရဟနျးဝတျ ဦးဇောျဇောျ၏ (၅၃)နှဈမွောကျမှေးနေ့ရကျမွတျတှငျပွငျဦးလှငျမွို့ရှိ ဓမ်မသဟာယသာသနစငျတာ၌ ရဟနျး …
ထိုင်၀မ်မှ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးပျံလွန်တော်မူပြီး ၁၀ရက်အထိ ကိုယ်ခန္ဓာမပျက်စီးဘဲသာမန်လူတစ်ဦးကဲ့သို့ ရှိနေသည့်အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်များမှလာရောက်စစ်ဆေး
Zawgyi ထိုင်ဝမ်မှ တိဗက်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်တော်ကြီး တစ်ပါးဟာ ဇူလိုင် ၁၄ ရက်မှာ ဆေးပညာအရ ပျံလွန်တော်မူသွားပြီလို့ ကြေညာခဲ့ပေမယ့် ရှားပါးတဲ့ ဝိညာဏ တရားအားထုတ်မှု ‘သုခဒမ်” (Thukdam) အခြေအနေကို ရောက်ရှိ သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဝိပဿနာ ဘာဝနာထုံမွှန်းနေအောင် အားထုတ်ထားတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး ပျံလွန်တော်မူတာ ဒါမှမဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦီး ကွယ်လွန်ချိန်မှာ မပုပ်မသိုးဘဲ သာမန်အိပ်ပျော်နေသလို …
ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေမြင်တာနဲ့ လုပ်သမျှအကုန်ရပ်ပြီး အရိုအသေပေးတဲ့ မြို့
Unicode ဆှမျးခံကွှတဲ့ ဘုနျးဘုနျးတှမွေငျတာနဲ့ လုပျသမြှအကုနျရပျပွီး အရိုအသပေေးတဲ့ မွို့ လေးပါ…ရှားပါးလှတဲ့ မွို့လို့ဆိုရမှာပါ…ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတို့ ဂုဏျယူစရာမွို့လေးပါ.. ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ အမြားဆုံး နထေိုငျတဲ့ ကြှနျတောျတို့ မွနျမာနိုငျငံဟာ ကမ်ဘာမှာ အလှူအတနျးအရကျရောဆုံးလို့ နာမညျကွီးပါတယျ …..ဒါ့အပွငျ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ မွနျမာတှဟော ဘုနျးတောျကွီး ကြောငျးတှေ ဘုနျးဘုနျး တှကေိုလညျး ဆှမျးလောငျးတာ ကထိနျခငျးတာ အလှူဒါန ပွုတာတှေ့ အမွဲလုပျလေ့ ရှိပါတယျ …
ယခုဖှဈနတေဲ့ ဆရာတောကြ ကွှနတြောတြို့မှဈခှနယြေ အနီးက ဆရာတောလြညြးဖှဈနပှေီး တကယလြညြး ရောဂါဝဒနော ခံစားနရတောမို့ တတစြှမြးရာ ပို့ဈလေးနဲ့ကူညီတာပါ ပခုကျကူမှို့နယြ မှဈခှမှေို့ အနောကဖြကမြှို့စိုးရှာတှငြ သီတငြးသုံးသော ဆရာတောြ ဦးစနျဒိမာ သညခြှထေောကမြှာ အရိုးပါပေါသြညအြထိ ဝဒနောခံစားရလကွရြှိပှီး ခှဲစိတြ ဖှတတြောကရြနြ လိုအပနြသေော အခှအနေဖှဈေပါသဖှငြ့ ဤ အရှငအြား ကူညီလှူဒါနြးလိုသူမွားအတှကြ အကွိုးဆောငပြေးလိုပါသညကြူညီလှူဒါနြးလိုသူမွားအောကပြါဖုနြးဖှငြ့ဆကသြှယလြှူဒါနြးနိုငပြါသညြ ။ဆရာတောထြံ တိုကရြိုကဖြှဈစဆရောတောြ၏အကွိုးတောဆြောငဆြရာတောြ အရှငသြု …
နာမည်လေးက ထူးထူးဆန်းဆန်း ဒြာတဲ့လား….။ ဖခင် – ဦးတင်ဝင်း၊ မိခင်- ဒေါ်ခင်သန်းဝေ တို့ရဲ့ သမီးငယ်လေးက အသက် (၁၆) နှစ်၊ မိသားစုလေးဟာလှိုင်သာယာ (၉) ရပ်ကွက်မှာ၊ မိသားစုလိုက် အဆောင်ငှားပြီးနေကြသတဲ့။ မိခင်ဖြစ်သူက နံရိုးထိခိုက်မိထားတာမို့ အလုပ် မလုပ်နိုင်ဘဲ ဖခင်ဖြစ်သူကပဲ ရေခဲချောင်းရောင်းပြီးသမီးဖြစ်သူကိုလည်း ကျောင်းထားလို့ မိသားစုရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကြိုးစားရုန်းကန်ရရှာတဲ့ဘဝလေး။အမှတ်(၂)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊လှိုင်သာယာကနေ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ခုံအမှတ် …
ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းကို တိုက်ထုတ်ဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ကို မိမိဆန္ဒအလျောက် သွားကြမယ့် ဆရာဝန်များ
Zawgyi ကိုဗစြ ဒုတိယလှိုငြးကို တိုကျထုတျဖို့ ရခိုငပြွညျနယြ စစတြှမှေို့ကို မိမိဆနျဒအလြောကြ သှားကှမယြ့ ဆရာဝနျမြား ရခိုငပြွညျနယြ စစတြှမှေို့သို့ ကိုဗစြ Second Wave တှငျမိမိသဘောဆနျဒအလွှောကြ တာဝနသြိစိတဖြွငြ့ ရှှေ့ပွောငြးတာဝနျထမြးဆောငပြေးပါသော ၁. ဒေါက်တာကျေ်စာိုးဦး ဆမ-၂၈၇၃၄ ဗဟိုအမိုးသမီးဆေးရုံကွီး၊ရန်ကုနျ ၂. ဒေါက်တာကျေ်မာငျးသာ ဆမ-၂၉၈၄၃ ကုတငျ ၅၀၀ဆန့ျကလေးဆေးရုံကွီး၊ရန်ကငျးရန်ကုနျမွို့ ၃. ဒေါက်တာတငျမြတ်ထွနျး ဆမ-၃၉၀၂၆ ကုတငျ …
နှစ် ၁၆၀၀ သက်တမ်းရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကို အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတွေ့ပြီ
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အာရှတိုက်မှာ အလွန်ထွန်းကားပြန့်ပွားခဲ့တာပါ…အရင်ကဆို မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်.. အခုတော့ မရှိတော့ပါဘူး…. အာဖဂန်နစ္စတန်မှာဆိုရင် အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေဟာ ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်…. ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက အာဖဂန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်လောက်ထွန်းကားခဲ့လဲဆိုတာကို ယခုပြောပြမဲ့အဖြစ်အပျက်လေးက သက်သေတည်ခဲ့ပါတယ်… အဲတာကတော့ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၆၀၀ ခန့်က မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကို အကောင်းပကတိအတိုင်း တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ… …